I-Pixel 3a kunye ne-3a XL sele iivenkile ezininzi e-United States, kodwa ayithengiswa | I-Androidsis
Amaninzi amarhe okuba kwiiveki zakutshanje kunye neenyanga zijikeleze uluhlu lwebhajethi kaGoogle, ebizwa ngokuba yiPixel 3a kunye ne3a XL. Ukuba nabani na unemibuzo malunga nayo, abafana abavela kwiPolisa le-Android bafumene imifanekiso emibini yeebhokisi kwiiterminal zombini.
Ngokwamapolisa e-Android, iifoto ezimbini esikubonisa zona ngezantsi, zenziwe ngeZinto eziGqwesileyo zokuThenga eSwitzerland, eOhio kwaye isibonisa iGoogle Pixel 3a XL emibini, enye imhlophe enye imnyama. Imodeli ye-XL iya kusinika isikrini se-intshi ezi-6 sikhatshwa yi-64 GB yokugcina kwangaphakathi.
Uyifumana njani iGoogle Pixel Launcher eLa Launcher eMnyama
Ezi foto ziqinisekisa ukuba intetho esemthethweni yoluhlu olutsha lwePixel 3a isondele kakhulu, mhlawumbi kwiveki ezayo. Okwangoku Akukho siqinisekiso sisemthethweni malunga nexabiso lentengiso, kodwa yonke into ibonakala ibonisa ukuba eUnited States, Ziya kuba namaxabiso kwi-399 euros yemodeli yePixel 3a kunye ne-479 euro yemodeli yePixel 3a XL.
Ibhokisi yesiphelo isibonisa kuphela umfanekiso wangasemva, apho ikhamera kunye nesenzwa somnwe weminwe sivelileyo. Asazi uyilo lwenxalenye engaphambili luza kubakho njani, Kodwa ukuba ufuna ukuba ngumgangatho kwimarike, ngaphaya kokufumana uhlaziyo lwe-Android ngaphambi kwabanye abavelisi, UGoogle kufuneka akhethe umphambili kunye nezakhelo ezincitshisiweyo zaya kutsho kwelona liphezulu.
UGoogle uqobo waqaphela kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukuba Ukuthengiswa kwesizukulwane sesithathu sePixel ayisiyiyo yonke loo nto eyayilindelwe yinkampani. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi kushukuma ukuzama ukufikelela kwinani elikhulu labasebenzisi, igqibe kwelokuba iye kwinqanaba eliphakathi. Kwiintsuku ezimbalwa siza kushiya amathandabuzo kwaye siya kukubonisa zonke iinkcukacha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-Pixel 3a kunye ne-3a XL sele iivenkile ezininzi e-United States, kodwa ayithengiswa